Tadiavo ny mpisolovava ho lova mba hamaha ny olana - Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!
Tadiavo ny mpisolovava ho lova mba hamaha ny olana
Ny asa dia milaza fa mba handova tsy misy fepetra
Ny famoizana ny olon-tiana iray dia amin'ny alalan'ny famaritana ny nampahatahotra ny fotoana, dia sarotra ny testIty olana mety hitombo ny zava-nitranga ny fifamaliana mikasika ny toetrany. Ny fifandirana ny lovany no tena fahita, ary mety hanimba ny fianakaviana. Ny andraikitry ny mpahay lalàna ao amin'ny lalàna mifehy ny fifandimbiasana dia ny manoro hevitra, mba hanampy sy hiaro anao amin'ny zava-nitranga ny olana mifandray amin'ny fandovana. Lovany dia ny lova navelany fa ny olona namela tamin'ny fotoana nahafatesany. Ny fifindran'ny ity lova manangana roa fanontaniana: inona no lalana ny fifindran'ny. Momba ny fanontaniana voalohany: ny lova dia mety haka endrika maro. Eto dia ny voalohany dia midika hoe ny fampitana ny lova: ny fampitana ny ara-dalàna, lova, ny didim-pananana, ny fanomezana sy ny fiainana fiantohana. Momba ny fanontaniana faharoa: ny olona iray dia afaka manondro olona ho toy ny tombontsoa ny lova: ny fianakaviana, ny havana, ny antoko fahatelo. Ny asa dia, na izany aza, hametraka ny sasany fitsipika manohitra ny mpandova (ankizy).
Izany dia mety ho fifandirana teo anoloan ny mpitsara
Mikasika ny lova, dia tsy maintsy ilaina ny manakarama mpisolo vava ao amin'ny lalàna mifehy ny fifandimbiasana toy ny tany am-boalohany araka izay azo atao, izany hoe eo anoloan'ny toe-draharaha dia tsy mitsaha-mitombo sy ny ratsy fa ny ady tsy feno faharatsiana. Miandry tsy misy tsy amin'ny fotoana farany Ireto misy toe-javatra izay ny anjara toeran'ny ny mpahay lalàna ao amin'ny lalàna mifehy ny fifandimbiasana dia zava-dehibe: Voalohany: ny fanontaniana raha toa ka tokony na tsy manaiky ny lova.
Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia aleo tsy mba handova, indrindra fa ny raharaha ny fandefasana ny trosany.
Ny mpahay lalàna ao lova lalàna afaka manoro hevitra ianao na tsia ny manaiky ny nifandimby. Izy no hanazava anao ny dingana ho tratrarina mba mandà ny lova. Faharoa: ny mpisolovava ao amin'ny fifandimbiasan'ny lalàna, dia afaka hirotsaka an-tsehatra raha toa tsapanao fa ny fizarana ny lova tsy ara-drariny. Ohatra: ny rahavavy nandova kokoa noho ny anao, ary maniry ny fifaninanana ity fizarana. Ho fampahalalana bebe kokoa momba ny resaka ifanakalozana, vakio ny karatra"Mpisolovava ny anjara". Fahatelo: ny mpikambana iray ao amin'ny fianakaviana na ny havana akaiky efa nanao na dia nanao fanomezana ao anatin'ny vanim-potoana fanararaotana ny fahalemena. Ny mpahay lalàna ao amin'ny lalàna mifehy ny fifandimbiasana dia manoro hevitra anao, hiaraka aminao, ary ianao no hiaro nandritra ny hetsika ara-dalàna.
Fahefatra: ny fampiasana ny mpahay lalàna ao amin'ny lalàna mifehy ny fifandimbiasana dia ihany koa ny soso-kevitra mafy ao ny zava-nitranga ny fifamaliana mikasika ny fizarana ny fananana ao indivision.
Ohatra: ny rahalahinao te-hitandrina ny fianakaviana an-trano raha te-hivarotra izany. Toe-javatra hafa mety hitranga Amin'ny tranga rehetra, ny asan ny mpisolovava hanome anao torohevitra, dia miezaha mba hanorim-ponenana isan-karazany ny fifandirana sy hiaro anareo ho eo amin'ny fitsarana ao amin'ny hetsika ara-dalàna ny fizotry ny tantara. Ny fotoana voalohany ny mpahay lalàna no tena zava-dehibe. Izany dia nandritra io fa ianareo dia afaka manazava ny toe-javatra sy ny raharaha ny mpisolovava. Ny tena zava-dehibe dia afaka manome toro-hevitra dia ny manaraka izao: manomana tsara ny fomba ianao dia manazava ny toe-draharaha sy ny foto-kevitra ny fifandirana. Mandray an-tsoratra tsy mba manadino na inona na inona zava-dehibe. Miteny ny naoty, dia tokony handinika ihany koa ny dika mitovy nidina ny fanontaniana rehetra izay te-hanontany ny mpisolovava.
Raha mahita ny mpahay lalàna, angamba ianao dia manana fanontaniana maro mba hanontany.
Mety ho henatra ny hanadino ny momba ny D andro mazava ho azy, Tsy maintsy hitondra amin'ny manana ny zava-dehibe rehetra antontan-taratasy, izany hoe, izay rehetra antontan-taratasy toy ny mety hahatonga ny fandalinana sy famakafakana ny tranga. Ny mpahay lalàna ao amin'ny lalàna ny fifandimbiasan'ny nametraka ny saram-pianarana, noho izany maimaim-poana. Izany dia na izany aza dia azo atao ny mamantatra eo ho eo isan'ora cost: mitaky ny eo ho eo ny roan-jato mandray euro telo ny ora iray. Ny fotoana voalohany, izay efa voaresaka etsy ambony, dia ho voampanga eo ho eo ny euros. Arakaraka ny maha-sarotra ny raharaha, ny mpisolovava, dia ho afaka hanome anao ny fonosana. Raha mikasa ny litigate, ny fonosana no mety ho vahaolana tsara indrindra. Azonao atao ihany koa, mandritra ny fotoana voalohany, mitovy hevitra amin ny fomba ny vokatra ara-karama (isan-jato takin'ny ny vola sitrana ao ny mazava ho azy fa ny fitsarana). Jurifiable azo antoka torohevitra araka ny lalàna, ary avy hatrany. Mahita ny mpisolovava amin'ny fandrefesana, mampitaha ny fakan-teny.
Ny fomba ny trosa famoriam-bola - Companeo. com